नेपाल आज | भ्वाइस अफ नेपालका उच्छृंखल जजः रुञ्चे गायक
भ्वाइस अफ नेपालका उच्छृंखल जजः रुञ्चे गायक
बुधबार, ०४ भदौ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । गीतसंगीत प्रेमीलाई रुचि लाग्ने हिमालयन टेलिभिजन एचडीमा गत साउन ३१ गतेदेखि शुरु भएको द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२ को दुई एपिसोड साउन २२ गते सम्पन्न भएको छ । यसमा ब्याटल राउण्ड, नट आउट हुँदै तीन जना उत्कृष्टमा छानिन्छन् र ग्राण्ड मिफानलेबाट भ्याइस अफ नेपाल छानिन्छन् ।
गत वर्ष सिडी विजय अधिकारीले उपाधि जितेका थिए । हरेक शुक्रबार र शनिबार राति साढे ८ हुने यो गीति कार्यक्रमको यसपालिका निर्णायकमा दीप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल, राजु लामा र आस्था रावत छन् । गत वर्षका निर्णायकमध्ये रक गायिका अभया सुब्बा र सोनुप पौडेल यसपटक छैनन् । गत वर्ष कतारमा भएको ग्राण्ड फिनालेमा उपस्थित हुन नसकेकाले सुब्बा यसपालि हटेको चर्चा छ ।
पप रककी २९ वर्षीया गायिका उफ्रेर, नाचेर अनेक हावभाउ देखाउने उत्ताउली बालिकाजस्तै छिन् । बेलाबेला ज्याकेट पनि मिलाउँदै पोज दिन्छिन्, बोलीमा कृतिमता छ । ‘चौबन्दीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा, पखेरीमा घाँस काट्न जान्या छैन भन्दैमा’ बोलकी प्रख्यात गायिकामा त्यस्तो उच्छृङ्खलता पाच्य छैन । धन्न उनले फाटेको प्याण्ट्स भने लगाएकी छैनन् । सिंगल हुनुको भाव बेलाबेला पोख्दै बिवाहको प्रशंग निकालिरहन्छिन् । निर्णायक सबै अंग्रेजी जान्ने छन्, नेपाङ्ग्रेजी बोल्छन् । नेपाली सिङ्गरहरु अंग्रेजी, हिन्दी टोनमा गाएर मात्तिसके भन्ने दीप पनि प्रायः इंग्लिश बोल्छन् । गत वर्ष उनकै टिमका अधिकारी विजेता भएका हुन् ।
गायकगायिका कोही दार्जिलिङबाट, कोही कतारबाट । कोही भजन गाउँदा गाउँदै आएका छन्, कोही रुँदा पनि गाउने बाल्यकाल भएका छन् । कोही हुनेखाने, कोही हुँदाखानेृ परिवारबाट आएका छन् । माओवादी आन्दोलनबाट आएका कोही, मेटल वर्कसपबाट आएका कोही । केही गायकहरु रोएरै मञ्चबाट बिदा हुन्छन् । जजहरु कतिपय प्रतिभाशाली गायकका गीतमा डुबेर पनि बज गर्दैनन् तर पनि आफ्नो मन दुखाएजस्तो गर्छन् । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको नेपाल आइडल–३ सिजनको भने यसपाली कुनै हल्लीखल्ली छैन ।
नेपालमा प्रतिभा प्रस्फुटनको ठाउँ नहुँदा कतिपय गायक–गायिका भारतीय गायन प्रतियोगितामा पुगेका छन । हालै १३ वर्षीय आयुष केसी र प्रितम आचार्यले सारेगमा लिटिल च्याम्पमा आफ्नो प्रस्तुतिबाट सबैलाई चकित पारे र पाँचौ–छैटौं त्यस्तै पोजिसन पाए । सुशान्त खत्री डान्स प्लसमा फेमस नै भए । पाँच वर्ष पहिलेृ बुटवलकी तेरिया मगरले डिआइडी लिटिल मागटर सिजनको उपाधि जितिन् । प्रशान्त तामाङ इण्डियन आइडल सिजन–३ उपाधि जित्दा नेपालमा जुलुस निक्ल्यो ।
के नेपालमा अम्बर गुरुङ, नारायण गोपाल, किरण खरेल, हरिभक्त कटुवाल, तारा देवी, अरुणा लामा, अरुण थापा, प्रेम औतारीजस्ता प्रतिभालाई हुर्काउन सरकारले लगानी गरेको गरेको छ? सरकार गल्ली, चोक, चौतारो, सडकमा गाएर हिँड्नेलाई टिपेर संरक्षण गर्न तयार छ? के ऊसँग गीत लेख्न प्रशिक्षण दिने योजना छ? मौलिक बाजाहरु मादल, सारंगी, आरबाजा, मुर्चुङ्गा, बिनायो, दुलर्भ ठाडो भाका, परम्परागत नृत्य आदि संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न बजेट छुट्याउँछ? प्रतिभाको डबली, नेपाल तारा, नेपाल आइडलजस्ता कार्यक्रम सबै टेलिभिजन र एफएम रेडियो चलाए हाम्रा प्रतिभाहरु मर्ने थिएनन् । कविकलाकारलाई भोकभोकै मर्न नदिने दायित्व पनि सरकारको हो । वर्षमा अर्बौं रकम फ्रिज हुने मुलुकमा असाधे विरामी स्रष्टालाई उपचार खर्चृका लागि केही करोड बजेट राखिदिए कसको गोजीबाट के जान्थ्यो?
यो समाचार जन आस्था साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।